संविधान जोगाउन जुटौँ देशवासी (सार्वजनिक) – Panchakoshi Daily
संविधान जोगाउन जुटौँ देशवासी (सार्वजनिक)
कृष्णप्रसाद अधिकारी । २०७७ माघ १७, शनिबार मा प्रकाशित
दैलेख ः संविधान जोगाउन जुटौँ देशवासीको म्यूजिक भिडियो सार्वजनीक भएको छ । देशको अवस्थालाई निहाल्दै देशको संविधान जोगाउन जुटौँ देशबासी भन्ने सन्देश प्रभाह गर्ने उद्दश्येले निर्माण गरिएको गितको म्यूजिक भिडियो सार्बजनिक गरिएको हो ।
चाहे हानोस गोली अव जाहे दियोस फाँसी ,संविधान जोगाउन जुटौँ देश बासी, जनतालाई उख्खु जस्तै पेल्न थालिसक्यो देशै खाने खलहरु खेल्न थालिसक्यो, सहिदको रगतले संविधान लेख्यौ, संविधानकै मुटुमा आज किन टेक्यो जस्ता सब्दले भरीएको गितमा गाएक गोपाल नेपाल जि.एम. र रेखा जोसीले स्वर दिएका छन् । दिपक जि.एम.ब्यवस्थापकमा निर्माण भएको उक्त गितमा शब्द शितल कादम्बिनी, संगित गोपाल नेपाल जि.एम.को रहेको छ ।
शुक्रबार दिपक जि.एमको यूटियुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा गोपाल नेपाल जि.एम. राजु केसी रेखा जोसी दिलु पन्त रमा रेग्मी लगाएतको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
हेर्नुहोस गितको म्यूजिक भिडियो ।